GARDAFUU: Shirar looga hadlayo horumarka Degmadda Murcanyo (Warbixin-kooban) – PuntlandNews24
Aqoonyahanadda, Waxgaradka iyo Nabadoonadda Degmadda Murcanyo oo ka tirsan gobolka Gardafuu ee Puntland ayaa mudooyinkii dambe wadday diyaar-garoow xoog leh oo ay ugu jiraan sidii sare loogu qaadi lahaa horumarka degmaddaas sida Waxbarshadda,Caafimaadka,amaanka iyo weliba xoojinta ganacsiyadda degmadda la leedahay dhulka intiisa kale iyadda oo xooga saaray sidii magaaladda loogu hirgelin lahaa goobo-waxbarsho.
Kulamadii ay lahaayeen ayaa waxaa ka soo baxay in sida ugu dhaqsaha badan loo hirgeliyo Dugsiga Hoose/Dhexe ee Faatax Faahiye kaasi oo tirsiga Dugsiyadda Puntland uga jira 20304 isaga oo wakhtigaas ku diiwan-gashnaa Dugsiga Hoose Murcanyo ee Gobolka Bari.
Sida aanu ka soo xignay Wasaaradda waxbarshadda Dowladda Puntland Degmadda Caluula oo ah magaalo madaxda Gobolka Gardafuu ayaa leh 11 Dugsi hoose kuwaas ay ka mid yihiin Dugsiyadda Xabo, Geesaley, Murcanyo, Xoogad iyo Caluula.
PN24 waxa ka go’an idin ay soo baahiso dhammaan wararka la xiriira horumarka degaanadda ka fog laamiga kuwaas oo inta badan aysan warbaahinta ka hadlin, waxaana dhawaan idin soo gudbinaynaa warbixin la xiriirta waxbarashadda degaanka Murcanyo hadii Alle Idmo.
Xuquuqda Sawirka: Facebook
Magaaladda Murcanyo ayaa taariikh ahaan la sheega in ay laheyd dekad muhiim u aheyd Goboladda Waqooyi-bari ee Soomaaliya taasi oo isku xiri jirtay Dekada Al Mukalla, Jeddah iyo ganacsiga Dalka Hindiya ee Mumbai sida aanu ka soo xignay dad taariikh wanaagsan ka haya degaankaas.
Sanadkii 1872dii waxaa la sheegay in magaaladda ku noolaayeen dad lagu qiyaasay 600-700 qof, iyadda oo Murcanyo uu asaaskeeda lahaa Faatax Faahiye oo qiyaastii 1775 maamulkii uu madaxda u ahaa ka talinayey degaanka Bandar Murcaayo iyo degaano kale oo ku dhow dhow.
Murcanyo ayaa sidoo kale caan ku ah ganacsiga noocyadiisa kala duwan balse u baahan inay hesho taageero Dowladda Puntland si sare loogu qaado wax soo saarka dadka degaanka sida uu PN24 u sheegay mid ka mid ah aqoonyahanadda degaankaas ka soo jeedo isaga oo hadalkiisa ku sii daray in horumarka degmadda uu yahay mid looga baahan yahay in qof walba oo degaankaasi ah ka qeyb qaato.
Degmadda Murcanyo ayaa waxa ay ka mid ah aheyd degaamo dhowr ah oo ka tirsan xeebaha Puntland oo ay ka da’een roobab lagu diirsaday sida degaano ka tirsan Gardafuu, Bari iyo Karkaar, iyadda oo roobabkaasi ku soo aadeen xilli abaar aad u xoog badan ka jirtay guud ahaan dalka Soomaaliya.
Nabadoon Maxamed Axmed Cali Boos oo ku sugan Murcanyo ayaa u sheegay PN24 in roobabku ku soo aadeen xilli baahi badan loo qabay roobka, Isaga oo Alle uga mahadceliyey raxmadiisa.
Dhismaha Gollaha degaanka ee Degmooyinka Gobolka Gardafuu
Waxa ay ku beegneyd December 14,2014 markii wafdi uu hogaaminayo Wasiirku xigeenka Wasarada arimaha Gudaha Dowladda Puntland Mudane. Cabdulahi Xaashi ( Qoob-Deero) uu gaaray Gobolka Gardafuu si xilligaas uu u dhiso Gollayaasha degaanka ee degmooyinka Caluula, Murcanyo iyo Bareeda oo ka tirsan 5 degmo ee Gobolka Gardafuu isaga oo ku guuleystay in December 16, 2014 – Degmadda Bareeda ayaa doortay Gollaha degaanka Degmadda iyo maamulkii hogaamin lahaa.
Sidoo kalena, December 22, 2014 – waxa uu ku guuleystay in degmadda Caluula ay si rasmi ah u yeelto Gollaha degaanka degmadda iyo maamulkii hogaamin lahaa.Xilligaa wixii ka dambeeyay Murcanyo nasiib uma yeelan inay hesho dhismaha Gollaha degaanka ee degmadaas inkastoo ay socdaan dadaalo lagu doonayo in sare loogu qaado horumarka degmadda Murcanyo sida ay noo sheegeen odayaasha degaankaas.
Maamulihii Madaxtooyadda Bosaso ee Puntland oo Toogasho lagu Dilay